असई गोविन्द विकको ह’त्याबारे यस्तो छ प्रहरी निष्कर्ष – Rapti Khabar
खिलानाथ ढकाल/सविता बुढा/सेतोपाटी
काठमाडौं/धनगढी, कात्तिक ३, धनगढी उपमहानगरपालिका-१२ जुगेडामा २०६५ सालमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको थियो। अस्थायी प्रहरी चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)को नेतृत्वमा १० जना प्रहरी खटाइएको थियो।
दुवै देशको सीमा छुट्याउने मोहना नदीले हो। जुगेडाबाट नदी करिब साढे पाँच किलोमिटर हो। मोहना पारि भने लामो दूरीसम्म जंगल छ। बीचमा बस्ती पनि छन्।
मोहना नदीमा शनिबार राति जुगेडा प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज असई गोविन्द विकलाई ह’त्या गरी फा’लिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका अनुसार यो त’स्करी हुने क्षेत्रले चिनिन्छ। यो ठाउँमा किराना सामान र कपडा त’स्करी अ’त्यधिक हुने गरेको छ। चौकीमा विक तीन महिनाअघि मात्र गएका थिए।
अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धान त’स्करी गर्ने स’मूहबाटै अ’सई विकको ह’त्या गरेकोमा नि’श्चिन्त छ। सो ठाउँमा विकले त’स्करीवि’रूद्ध आ’क्रामक का’रबाही गरिरहेका थिए।
‘उनी गइकन ग’स्ती नि’स्किने र चो’री त’स्करी निय’न्त्रणमा प्रहरी सक्रि’य भएको देखिन्छ,’ प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश सिंह भन्छन्।
उनका अनुसार वारिवारि गर्न पुल नभए पनि नदीमा पानीको सतह कम रहेका कारण आउजाउ कठिन हैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत असोज २४ गते चाडवाडलक्षित सुर’क्षा योजना ल्याएको थियो। त्यसमा मोबाइल तथा मोटरसाइकल गस्ती थियो। प्रदेश प्रहरीले चाडवाडलक्षित सुरक्षा योजना ल्याएपछि असई विक सक्रि’य रुपमा त’स्करी रोक्न खटिने गरेका थिए।
असई विक चौकीबाट निस्किँदा ८ बजेको थियो। उनले दाङ बान्नीगढी-जयगढ गाउँपालिका-५ घर भएका ३२ वर्षीय प्रहरी जवान रामबहादुर साउँद साथमा लगेका थिए।
दुबै जना बा५८प ५२८४ नम्बरको मोटरसाइकल लिएर ग’स्तीमा निस्केका थिए। दुवै बर्दीमै थिए। मोटरसाइकल असई विकले नै हाँ’केका थिए।
दुईमध्ये असई विकले साथमा चाइ’निज पे’स्तोल बोकेका थिए। त’स्करी नि’यन्त्रणमा खटिने प्रहरीमाथि सु’रक्षा चुनौ’ती रहन्छ। तर, त’स्करी निय’न्त्रणकै क्रममा प्रहरी मा’रिएको यो घटना भने दु’र्लभ हो।
खोलानजिक पुग्नेवित्तिकै ह’त्या
माओवादी स’शस्त्र द्व’न्द्वका’लमा प्रह’रीलाई निय’न्त्रणमा लिएर ह’त्या गरिन्थ्यो। असई विकलाई पनि नि’यन्त्रणमै लिएर ह’त्या गरिएको हो कि भन्ने ‘शंका पनि छ।
शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि प्र’हरी ह’त्याको शृं’खला रो’किएको थियो। अ’प’राध र त’स्करी नि’यन्त्र’णमा खटिने ब’र्दीधा’री प्रहरीको ह’त्याले द्व’न्द्वका’लको घटनालाई पु’नरावृ’त्ति गरेको झ’ल्को दिएको छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदीका अनुसार यो मोटरसाइकल चौकीबाट अढाइ किलोमिटर पर भेटिएको छ। विकको श’व साढे पाँच किलोमिटर पर खो’लामा भेटिएको छ।
खोलोबाट सामान वारि ल्याउने त’स्करको स’मूह स’क्रिय भएका कारण उनीहरू नाका छे’क्न पै’दल गएका थिए। उनीहरू खोलै छेउमा पुगेर त’स्कर र सामान निय’न्त्रणमा लिने उ’द्देश्यले गएको देखिन्छ।
‘खोलावारि करिब तीन सय मिटर ठाउँमा असई र जवान पुगेपछि त’स्कर स’मूह’बीच घ’म्साघ’म्सी भएको देखिन्छ,’ डिआइजी सुवेदीले भने।
उनका अनुसार ब’र्दीधा’री प्रह’री ह’त्यामा वि’शिष्ट आ’परा’धिक म’नोवृ’त्ति देखिन्छ। दुवै जना राति ११ बजेसम्म स’म्प’र्कमै देखिन्छन्। ११ बजेपछि उनीहरूको सम्पर्क टु’ट्छ।
त’स्करी गर्ने स’मूह असईसँग चि’ढिएको भने हो। त’स्करको ‘प्रि प्लान’ भने दे’खिँदैन। ‘मु’ठभेड भएको दे’खिन्छ, त’स्करको समू’ह १० जनासम्म देखिन्छ,’ सुवेदीले भने।
सुवेदीका अनुसार त्यो स’मूह नेपालमै नै छ र नेपालकै त’स्करबाट असईको ह’त्या भएको छ। असईले गो’ली किन च’लाउन सकेनन्?
त’स्करी गर्ने समूह बढी सं’ख्याको थियो र त्यसले असई र जवानलाई तु’रुन्तै निय’न्त्रणमा लिन स’क्यो?
अनु’सन्धा’नको अर्को पाटो यसतर्फ पनि छ। सुवेदी भन्छन्, ‘मृ’तक असईले क’म्मरबाट पे’स्तोल नि’कालेर फा’यर गर्न अस’मर्थ रहे।’ उनका अनुसार दुवै प्रह’रीको ह’त्या भइसकेको छ। जवा’नको श’व भेटिन बाँकी हो।
‘फा’यर खोल्न मात्र सकेको भए पनि उनको ज्या’नको थो’रब’हुत सुर’क्षा सक्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘उनले हति’यार च’लाउन स’केनन्, त्यसैले नदीभन्दा अगाडि नेपालतर्फ नै दुवै प्रहरीको ह’त्या गरियो।’
ह’त्यापछि खोलामा फालिएका अ’सईको साथमा रहेको पे’स्तोल छैन। त’स्करको स’मूहले उनको पे’स्तोल लु’टेर लगेको सुवेदीले बताए।
सुवेदीले प्रहरीको ह’त्या गर्ने स’मूह पहिचान भइसकेको बताए। ‘शं’कास्प’द ११ जना प’क्राउ परिसकेका छन्, ह’त्या गर्ने त’स्कर नेपाली हुन्, भारतीय त’स्करसँ’ग उनीहरूको सम्पर्क स’म्बन्धबारे अ’नुस’न्धान भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘एक-दुई दिनभित्रै र’हस्य प’र्दा’फास गर्छौं।’
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ सुकुम्बासी बस्तीमा जन्मेका २८ वर्षीय विक पढाइमा अब्बल थिए। एसएलसी पास गरेपछि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर उनले प्लस टु र स्नातक गरेका थिए।
७ वर्षको छँदा उनका बुवा बि’ते। आमाले ज्याला मजदुरी गरेर घर चलाउँथिन्।
सोमबार साँझ उनको पुनर्वास नगरपालिका–९ मै पर्ने दो’दा नदीमा अन्तिम सं’स्कार गरिएको छ। उनको पा’र्थिव शरीरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी सुवेदीले नेपाल प्रहरीको झण्डा ओढाएर अन्तिम स’म्मान व्यक्त गरे।
प्रहरीमा सेवा गर्दागर्दै ज्या’न गु’माएका उनको परिवारलाई अमर प्रहरीको परिवारका हैसियतले संगठनले मूल्यांकन गर्ने सुवेदीले बताए। -सेतोपाटीबाट साभार
रामहरि ओझा/अनलाइनखबर ३० असोज, डोटी । डोटी विमानस्थलको पहिलो उडान ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेजस्तै भएको छ । असोज १७ गते परीक्षण उडानपछि शुक्रबार कैलालीको गेटा बिमानस्थलबाट १६ जना यात्रु बोकेर आएको बिमानले डोटीबाट भने समयको कारण देखाउँदै बिमानस्थलमै पुगेका यात्रु छोडेर उडेको छ । समिट एयरको ९ एन—एकेएड विमान बिहान ११ वजे डोटी विमानस्थलमा अवतरण […]
कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार क–कसले पाउँछन् ? हेर्नुस